Big Money Slingo Bonus | £ 250,000 Ghanna | CoinFalls Online Casino
Haddii aad tahay taageere kulan Slingo oo asal ahaan yihiin isku-dar ah naadi iyo bingo, markaas Big Money Slingo Bonus waa xaqiiqo ah oo qiimihiisu tijaabinin. Ma jiro mid ka mid ah laakiin 6 meelo halkaas oo aad ka ciyaari karaan kulankaan. Waxaad dooran kartaa in aad qaado aad doorato inta aadan bilaabin ciyaarta. ka iman kara guusha ee Slingo this waa weyn halkaas oo aad kor ku guuleysan karto in a £ 250,000 Ghanna. Si taas ku guuleysan £ 250,000 Ghanna, aad u baahan tahay inaad buuxiso tirada ugu badan ee khadadka sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa loogu talagalay iyo in la horumariyo by horumarinta software ciyaaraha IWG oo ay sameeyaan qaar ka mid ah shaqo runtii la yaab leh la naqshadeynta iyo gameplay ah.
Play Big Money Slingo iyo guuleysan £ 250,000 Ghanna
Slingo Tani waa kaliya mid ka mid ah nooc ka mid ah. Just bilowgii ciyaarta, lagu siiyo fursad aad ku doorato mida lixda goobood inay ka ciyaaraan. meelo waa soo jeedan Hamlet, Fields Golden, Royal Forest, Tahriibayaasha Cove, Diamond Fiinta iyo Lucky Gulch. Mid kasta oo ka goobood waxay leedahay qiime kala duwan in uu bilaabo ka yar intii 50p ee Joker ee Hamlet oo gaadhaa ilaa £ 15 Gulch Lucky ah. gameplay ee mid kasta oo meelahaas waa isku mid. Faraqa kaliya ee waa lacag abaalmarin ah iyo interface ee ciyaarta. Waxaa jira fursad aad u qabsoomayn a £ 250,000 Ghanna by dhamaadkii ciyaarta this.
gameplay ee ciyaarta this cajiib ah waa mid aad u fudud. Sida ugu dhakhsaha badan u bilaabo, waxaa lagu siin doonaa 6 fursadaha meelaha aad rabto in aad ku ciyaarto. Ka dib marka aad ka dooro mid ka mid ah lix fursadaha, aad waxaa loo qaadi doonaa shaashadda weyn. bet kasta oo ku siinayaa 6 dhigeeysa iyo aad kaliya leeyihiin si ay u sameeyaan tirada ugu badan ee khadadka. Waxaad hadda leeyihiin inay riix badhanka bilowga iyo ilaa 4 Jeedan la soo bandhigi doonaa on your guddiga. Lataliyihii kasta oo ka mid ah muujin doonaa tiro ama wareejin ah oo lacag la'aan ah. The soo jeedan in lagu daray bilowgii gameplay ka degi doono sanduuq oo ma waxaad yeelan doontaa in la Calaameeyey off ee horyaalka. line kasta waxay yeelan doonaan fallaadh at madaxa oo muujinaysa xaddiga lacageed ee in aad ku guuleysan karto by tartamaya line in. Waxaad ku guuleysan karto sida weyn sida a £ 250,000 Ghanna iyagoo horyaalka ku dhameysan khadadka.
Slingo uu leeyahay qaar ka mid ah xeerarka run ahaantii la yaab leh iyo sawiro aad u soo jiidasho. Tani hubaashii waa pleaser dadkii badnaa la weyn a a £ 250,000 Ghanna iyo gameplay fudud. Adugu waxaad tahay mid socday in ay leeyihiin wax badan oo xiiso leh this ciyaaro haddii aad tahay bingo ama taageere Afyare a.